Onye ụkọchukwu Katọlik na Naijiria nwụrụ anwụ mgbe ọ nwụsịrị | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Onye ụkọchukwu Katọlik na Nigeria nwụrụ anwụ mgbe ọ nwụsịrị
di Paolo Tescione - Jenụwarị 19, 2021
Achọpụtara ozu onye ụkọchukwu Katọlik na Satọde na Naịjirịa, ụbọchị mgbe ndị oji egbe jidere ya.
Agenzia Fides, ọrụ ozi nke Pontifical Mission Societies, kwuru na Jenụwarị 18 na Fr. John Gbakaan "eboro ya were mma were obi ọjọọ gbuo ya na njirimara ya fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume."
Menkọchukwu ahụ sitere na dayọsis Minna, na eriri etiti Nigeria, wakporo ndị nwoke a na-amatabeghị na mgbede nke ọnwa Jenụwarị 15. Ya na nwanne ya nwoke nke nwoke na nwanne ya na-eme njem n'okporo ụzọ Lambata-Lapai na Niger State mgbe ọ gara ileta nne ya na Makurdi, Benue State.
Dabere na Fides, ndị ntọrọ mmadụ rịọrọ ka e nye ha ego ruru nde naira 30 (ihe dị ka $ 70.000) maka ịhapụ ụmụnne abụọ ahụ, ma mechaa belata ọnụ ọgụgụ ahụ ruo nde naira ise (ihe dị ka $ 12.000).
Ndị mgbasa ozi obodo kwuru na a hụrụ ozu onye ụkọchukwu ahụ kegidere osisi na Jenụwarị 16. E nwetakwara ụgbọala ya, bụ Toyota Venza. Nwanne ya nwoke ka na-efu efu.
Ka Gbakaan gbusịrị ndị isi ụka Christian, ha kpọrọ gọọmentị etiti nke Naịjirịa ka ha mee ihe iji kwụsị mwakpo ndị ụkọchukwu.
Medialọ ọrụ mgbasa ozi dị n'ime obodo kpọpụtara Rev. John Joseph Hayab, osote onye isi otu Christian Association of Nigeria na mpaghara ugwu Naịjirịa na-ekwu, "Anyị na-arịọ gọọmentị etiti na ndị ọrụ nchekwa niile ka ha mee ihe ọbụla iji weta ajọ ihe a na Kwụsị."
"Ihe niile anyị na-arịọ gọọmentị bụ nchekwa n'aka ndị ajọ mmadụ na-emebi ndụ anyị na ihe onwunwe anyị."
Ihe merenụ bụ nke ikpeazụ n'ime ọtụtụ ịtọrọ ndị ụkọchukwu na mba kachasị n'ọnụ ọgụgụ n'Africa.
Na abali iri-abuo na asaa n’ime onwa iri na abuo n’ime onwaise, aturu ndi Bishop Moses Chikwe, onye enyemaka inye aka na archbiocese nke Owerri, tinyere onye na-anya ya A tọhapụrụ ya mgbe ụbọchị ise nke ndọrọ n'agha gasịrị.
Na Disemba 15, Fr. A tọgbọrọ Valentine Oluchukwu Ezeagu, bụ onye otu n'ime ụmụ nke Mary Mother of Mercy na steeti Imo mgbe ọ na-aga olili nna ya na steeti Anambra dị nso. A tọhapụrụ ya n’echi ya.
Na Nọvemba, Fr. A tọgbọrọ Matthew Dajo, onye ụkọchukwu bishọp Abuja, hapụ ya ka ụbọchị iri gachara.
Hayab kwuru na oke ịtọrọ mmadụ na-egbochi ndị na-eto eto ịchụso ọrụ ndị ụkọchukwu.
Ọ sịrị, "Taa na mgbago ugwu Naịjirịa, ọtụtụ mmadụ na-atụ egwu ma ọtụtụ ndị na-eto eto na-atụ ụjọ ịbụ ndị ọzụzụ atụrụ n'ihi na ndụ ndị ọzụzụ atụrụ nọ n'oké ihe egwu.
"Mgbe ndị ohi ma ọ bụ ndị ntọ jidere na ndị ha na-ata ahụhụ bụ ndị ụkọchukwu ma ọ bụ ndị ọzụzụ atụrụ, ọ na-adị ka mmụọ ịkpa ike na-ejide obi ha iji chọọ ka a gbapụta ha ma n'ọnọdụ ụfọdụ, ọ na-agarịrị igbu onye ahụ
ACI Africa, CNA onye ntaakụkọ onye ntaakụkọ Africa, kwuru na n'abalị iri nke ọnwa Jenụwarị Achịbishọp Ignatius Kaigama nke Abuja kwuru na ntọrọ ndị mmadụ ga-enye mba ahụ "aha ọjọọ" n'uwa.
Ọ sị, "Ọ bụrụ na ndị ọchịchị Naịjirịa egbochighị ya, omume a ihere ma na-asọ oyi ga-aga n'ihu na-enye Naịjirịa aha ọjọọ ma na-atụ ndị ọbịa na ndị ọchụnta ego mba ahụ ụjọ."
Na-ewepụta akụkọ kwa afọ nke World Watch List n’izu gara aga, otu ndị na-agbachitere Open Doors kwuru na nchebe na Nigeria emebiwo ruo n’ókè nke na mba ahụ abanyela mba iri kacha njọ maka mkpagbu nke Ndị Kraịst.
N'ọnwa Disemba, Ngalaba Na-ahụ Maka Ọchịchị na United States depụtara Nigeria n'ime mba kacha njọ maka nnwere onwe okpukpe, na-akọwa mba West Africa dị ka "obodo kachasị mkpa."
Nke a bụ aha edepụtara edepụtara maka mba ebe mmebi iwu kacha njọ nke nnwere onwe okpukpe na-eme, mba ndị ọzọ bụ China, North Korea na Saudi Arabia.
E toro usoro a site na ndị isi nke Knights nke Columbus.
Chief Knight Carl Anderson kwuru na "Ndị Kristian nọ na Naịjirịa ataala ahụhụ nke ukwuu n'aka ndị Boko Haram na otu ndị ọzọ".
Ọ tụrụ aro na ogbugbu na ịtọrọ ndị otu Kraịst na Nigeria bụ "oke mgbukpọ agbụrụ".
O kwuru, sị: “Ndị Kraịst nke Nigeria, ma ndị Katọlik ma ndị Protestant, kwesịrị nlebara anya, nnabata na nnwere onwe ugbu a. Ndị Kraịst nọ na Naịjirịa kwesịrị ibi n'udo ma na-eme ihe okwukwe ha n'atụghị ụjọ
Pope Francis kwuru maka nnabata na nleta na Ura na Iraq
Ivan Jurkovic: nkwado nri na mba ndị dara ogbenye
Ezinụlọ: nzukọ dị n'etiti gọọmentị na Vatican
Pope Francis: Iraq, njem!
Kedụ ka ụka si eme omume mgbasa ozi?
Angelus nke Pope Francis "ọsọ ọsọ si asịrị"
Ezinaụlọ Indian manyere ịhapụ obodo ahụ